Ma ogtahay in ka badan 3.03 milyan oo carruur ah oo ku nool Mareykanka uu ku dhacay cudurka loo yaqaan coronavirus-ka cusub. Fadlan hubi wararka CFM maanta. | Jesson
Ma ogtahay in ka badan 3.03 milyan oo carruur ah oo ku nool Mareykanka uu ku dhacay cudurka loo yaqaan coronavirus-ka cusub. Fadlan hubi wararka CFM maanta.
1. Bangiga Ameerika] Sahankii maareeyaha sanduuqa ee bishii Febraayo wuxuu muujiyay in qoondaynta saamiyada iyo badeecadaha ay gaareen heerkii ugu sarreeyay tan iyo Febraayo 2011. Hantidhowrka maaliyadeed ee maareeyayaasha ayaa hoos ugu dhacay 3.8 boqolkiiba, heerkii ugu hooseeyay tan iyo kahor "argaggixisada" tapering bishii Maarso 2013.
2. Xafiiska Miisaaniyadda Kongareeska: 30 sano gudahood, culeyska deynta ee Mareykanka wuxuu labanlaabmi doonaa wax soo saarkiisa dhaqaale sanadkiiba. Marka la gaaro 2051, deynta guud ee Mareykanka waxay noqon doontaa 202% ee GDP, ku dhowaad laba jibbaar heerka ay hadda joogto. Markii ugu horreysay tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, heerka deynta Mareykanka wuxuu ka batay 100% GDP sanadkii la soo dhaafay, heerka deynta mustaqbalka ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu jabiyo rikoorkeeda taariikhiga ah.
3. Ururka Caafimaadka Adduunka: wareegyadii 12-aad iyo 13-aad ee cudurka Ebola wuxuu ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo (DRC). Kala soocida hidde-sidaha ee fayraska Ebola ee maxalliga ah ayaa la sameeyay si loo hubiyo in soo noqoshada ay sabab u tahay kiisaska suurtagalka ah ama gudbinta xoolaha-ka-aadanaha ee cusub. Tallaalka ballaaran wuxuu kuxiranyahay dowladaha iyo helitaanka tallaalka. Digniino ayaa la siiyay lix dal oo ku xeeran sida Sierra Leone iyo Liberia si loo ogaado kiisaska suuragalka ah.
4. Warbaahinta Mareykanka: sida ku xusan xogta sahaminta ee ay soo saartay Akadeemiyada Cudurrada Carruurta ee Mareykanka, laga soo bilaabo Febraayo 11, in ka badan 3.03 milyan oo carruur ah oo ku nool Mareykanka waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaan 'coronavirus', taasoo ka dhigan qiyaastii 13% tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay. waxaa qoray COVID-19 Mareykanka. Toddobaadkii hore oo keliya, tirada carruurta uu ku dhacay cudurka loo yaqaan 'coronavirus novel' waxay ahayd qiyaastii 90, 000.
5. Machadka Maaliyadda Caalamiga ah: sannadka 2020, Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu ku kordhiyay deynta adduunka US $ 24 tiriliyan oo rikoor u dhiganta US $ 281 trillion, oo leh saamiga deynta-iyo-GDP-ga adduunka oo ka badan 355%. Barnaamijyada ay taageerto dowladda ayaa lagu sheegay kala bar kororka, iyadoo shirkadaha caalamiga ah, bangiga iyo deynta guryaha ay kordheen US $ 5.4 trillion, US $ 3.9 trillion iyo US $ 2.6 trillion, siday u kala horreeyaan.
6. Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Lincoln ayaa u sheegay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay in Mareykanku uu bixin doono in ka badan 200 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo ah xubinimada Ururka Caafimaadka Adduunka dhamaadka bishaan. "Tani waxay ka tarjumaysaa ballanqaadkeenii ugu dambeeyay ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) si loo hubiyo in WHO ay hesho taageerada ay mudan tahay ee ku aaddan hoggaaminta jawaabta caalamiga ah ee Cudurka 'COVID-19', waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa dib-u-habeynta Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) mustaqbalka , ”Ayuu yiri Blinken. “
7. Brazil: Tallaalka Shiinaha ee Sinopec COVID-19 ayaa la tijaabiyey inuu waxtar u leeyahay ka hortagga cudurka cusub ee 'coronavirus' ee ka socda Boqortooyada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. 17kii Febraayo, Machadka Butantan wuxuu bilaabay olole ballaaran oo tallaal ah oo lagu beegsanayo dhammaan dadka qaangaarka ah lana baarayo inuu yareeyay heerka cudurka. Adeegsiga tikniyoolajiyadda aan shaqeyn, tallaalka ay soo saartay Shiinaha Sayniska iyo Teknolojiyada ayaa la filayaa inuu ka faa’iideysan doono tallaallada kale.
Waqtiga boostada: Feb-19-2021